Fursadaha Shaqada ee Hindida UAE ✰✰✰✰✰ & Visa Ayaa La Bixiyay
Awoodda Shaqooyinka ee Hindida ah ee Imaatinka
Waa Badbaadin Si Loo Qaado UAE
Fursadaha Xirfadaha ee dadka Hindiya ee UAE, run ahaantii, waa heshiis weyn oo loogu talagalay mushaarooyinka Hindida. Dhaqaalaha UAE wuxuu u korayaa si xawli ah taas oo ah mid aan dhammaanayn fursado shaqo. Haddii aad ku sugan tahay Hindiya oo aad shaqo raadinayso, Carabtu waa xulasho weyn. Way sahlan tahay inaad shaqo ka hesho India intii aad ka fikiri karto. Dadka badankood way ka xishoon inay codsi u diraan dalka dibadiisa sababtoo ah saadka iyo cabsida aan la garanaynin.
Dhawaan, Hindida dawladdu waxay la timid tabo cusub ma aha oo kaliya in la socodsiinayo laakiin waxay gacan ka geysaneysaa sugidda amniga muwaadiniinteeda inta ay ka shaqeynayaan dalal shisheeye. Mid ka mid ah meelaha ugu waaweyn ee loo safro shaqaaluhu ee UAE. Waxay caan ku tahay adduunka oo dhan inay u tahay dal fursado u leh aqoonyahannada ka hawlgala dhammaan qaybaha kala duwan.
Tan iyo bilowgii sanadka, Hindi waxaa looga baahan yahay inay iska diiwaan geliyaan qadka tooska ah ee ay dowlada maamusho Waxay u baxaan UAE shaqo. Tani waxay qusaysaa dadka haysta baasaboorada non-ECR ee ku safraya shaqada. Tiro aad u yar oo Hindi ah ayaa u taga UAE si ay u soo booqdaan ama u fasax galaan, fiisada ugu fudud ayaa ah xagga shaqada. Dawladdu waxay u baahan tahay muwaadin kasta oo Hindi ah oo xiiseynaya u dhaqaaqista UAE inuu dhammaystiro hawsha diiwaangelinta ugu yaraan saacadaha 24 ka hor waqtiga dhabta ah ee bixitaanka. Ujeeddada kaliya ayaa ah in la ilaaliyo daryeelka iyo danaha Muwaadiniinta Hindida inta ay dibada ka shaqeynayaan.
Shaqo ka raadso UAE
UAE waa suuq loo shaqeeye fursad loo siman yahay. Ma aha inaad ka walwasho dhalashadaada. Dhab ahaan, gobolka Arab waxay xiriir dhow la leedahay qaaradda Hindiya sidaa daraadeed si fudud ayaa loo diyaarin karaa dukumentiyada haddii aad u qalanto shaqo. Sida muwaadiniinta adduunka oo dhan, waa inaad si ballaaran u baartaa fursadaha jira iyo inaad sameyso dalabyo ku habboon danahaaga.
Way ka sahlan tahay Hindiya marka loo eego inta badan qaybaha kale ee adduunka sababta oo ah dadaallada dowladda in la caawiyo muwaadiniinta xirfad leh iyo kuwa aan xirfadda lahayn si ay shaqo uga helaan gudaha iyo dibedda qaaradda. Tirada dadka ku nool dalka Hindiya ayaa ka mid ah kuwa ugu waaweyn adduunka. Dadka waaweyn ka mid noqoshada xoogga weyn ee shaqada, aad u yar oo ka mid ah ayaa leh shaqooyin deggan sidaa darteed dakhli aan lagu kalsoonaan karin.
Waxaan hubaa inaad fahantay xaalada dhaqaale ee Hindiya marka laga hadlayo heerarka daqliga reerka. Maaha wax sir ah ama ceeb ku ah dawladda; dawladda India si geesinimo leh ayey uga soo baxday in laga caawiyo muwaadiniinteeda sidii ay shaqo ugu heli lahaayeen dibedda meelaha ay ka midka yihiin UAE. Dabcan, tani waxay kor u qaadeysaa GDP ee waddankooda hooyo. Waa istaraatiijiyad ay sameysay dowladda qaran taasoo u sahlaysa dadka Hindida ah inay shaqo ka helaan UAE.
Way fududahay in laga baaraandego fiisada ardayda ee Hindiya ilaa UAE. Qiimaha la xiriira safarka ardayda sidoo kale waa hooseeya. Waxaa kuu balan qaadayaa inaad boos ka hesho UAE. Hadafka, kiiskan, waa in cagta la dhigo dalka. Waad baran kartaa sanadaha 4 ama dhowr bilood markii aad shaqo hesho. Iyada oo heerka shaqada sare ee UAE, ma seegi kartid shaqo; ha ahaato mid aan caadi ahayn ama xirfadle oo kuxiran shahaadooyinkaaga.
Deeq-waxbarasho waa talo bixin kaa caawisa inaad dalka soo gasho. Inta badan loo shaqeeyayaasha UAE waxay kaa caawin doonaan sameynta ruqsadda shaqada ku meelgaarka ah. Haddii aad u maamusho inaad shaqo hesho muddo dheer, rukhsadda ayaa la dheereeyey oo waxay ku dhammaan doontaa mid joogto ah. Helitaanka dhalashada UAE waa guul weyn, laakiin waa inaad samir yeelatid oo la socotid howlahaaga. Waa inaad kalsooni ka heshaa dadka waddanka deggan; Aaminaadu waa muhiim dhaqanka carabta.
Dhaqanka Hindida iyo Carabtu way isla siman yihiin sidaa darteedna is-dhexgalka fudud ee ka dhexeeya dadka asalka ahi waxay labadaba dhaqan u yihiin. Waa inaad ka faa'iideysataa cilaaqaadka aasaasay ee ku saleysan diinta si aad u hesho shaqo nooc kasta ah. Waa in aad inaad maskax furnaato markay shaqo ka raadsanayso UAE. Loo shaqeeyeyaasha badankood waxay raadsadaan inay fiiro gaar ah yeeshaan, qiimeeyaan, oo ay aaminaadda iyo aaminaadda ka helaan shaqaalaha ka hor intaysan u xilsaarin doorar gaar ah oo ay la wadaagaan istiraatiijiyad shirkadeed. Tani waxay quseysaa dhammaan dhinacyada ganacsiga.
U fur furnaanshaha ulajeeddadaada, oo waxaad si fudud uga heli kartaa gudbinta saaxiib ama qaraabo ka mid ah saaxiibbada aad wada shaqeysaan ee Hindiya. U guuritaanka UAE xagga fiisaha shaqada ma aha wax adag, laakiin marka hore, waa inaad ka shaqaysaa sidii aad ku heli lahayd shaqo kugu habboon. Heerarka nolosha ee Carabtu waxay kuxirantahay magaalada aad dooranayso inaad dagto.
Si kastaba ha ahaatee, waa in aad marka hore fiiro gaar ah si aad shaqo u hesho, inta soo hartana waa la raacayaa.
UAE waa loo shaqeeye koowaad; qof kasta wuu sameyn lahaa Fursad u hel inaad aadid Dubai xitaa usbuuc-dhammaadka keliya. Gobolka Carabtu si dhakhso badan ayuu u kobcayaa taas oo micnaheedu yahay fursad badan oo xagga ganacsiga iyo shaqaalaysiinta ah Haddii aad leedahay wax xirfad ah, waxaad ka heli kartaa fursado shaqo oo wanaagsan Dubai. Heerka mushaarka ee Dubai sidoo kale waa mid cajiib ah; Ka sokow, biilasha guryaha iyo tasiilaadka tamartu kuma eka sida wadamada kale ee adduunka oo dhan. Isku darka saliida badan iyo Dhaqanka Carabtu wuxuu ka dhigayaa meesha ugu fiican ee ay noqon karaan Hindida sababta oo ah is fahamka labada dhaqan.
Ma heli karaa shaqo? - Fursadaha Shaqada ee Hindida UAE?
Dubai waxay leedahay shaqaale xirfad hooseeya waxayna markasta raadineysaa shaqsiyaad karti u leh buuxinta jagadan. Dadka deegaanka ayaa hodan ku ah saliida sababta oo ah wax dhib ahna kuma qabin bixinta mushaarka shaqaalaha illaa iyo inta ganacsigu u shaqeynayo sidii ay filayeen. Arrinta kaliya ee helitaanka shaqo ee Dubai waa is dhexgalka dhaqanka. Dadka u dhashay Carabtu waxay ku adag yihiin waxay aaminsan yihiin oo si fudud ayaa looga xanaaqi karaa haddii aad si kale u dhaqantid; In kasta oo laga yaabo inaadan la wadaagin ama aqbalin waxay rumeysan yihiin, waxay kaa filayaan inaad u dhaqanto si waafaqsan waxa la rumeysan yahay. Waa cadaalad ah inaad tixgeliso inaad joogtid waddankooda ugu yaraan, iyagu waa loo shaqeeyayaal.
In kasta oo ay caqabad tahay loogu talagalay dad badan oo shaqo ka doonaya Dubai, Hindida si fiican ayaa loo meeleeyaa sababtoo ah isku dhafka dhaqanka. Dabeecad adag ee mid kasta oo ka mid ah diimahaan waxay fududeyneysaa wada noolaashaha. Dhibaato kuma lihi sida Hindida oo kale oo aad u raacdo Carabtu. Hindida ayaa waliba ku adag qiyamkeeda, taas oo muhiim u ah carabta. Waxay leeyihiin dareen edbin ah sida reer India.
Waana sababta muuqata in labada gobol ay xiriir dhow leeyihiin. Fahamka qaybaha bulshada iyo diinta waxay ka dhigtaa saaxiibo muddo dheer sii jira. Haddii aad ahayd koox waraysi la yeeshay oo leh aqoon isku mid ah kuna saleysan heerka xirfadda, intaad ka faa iidaysan lahayd asligaaga awgiis asalkaaga awgiisn. Inkasta oo tan lagu dhaleeceyn karo dhinacyo kala duwan, loo shaqeeyaha Dubai ayaa leh doorbidasho iyo xuquuq ay u leeyihiin.
Haa, si fudud ayaad u heli kartaa shaqo Dubai haddii aad ka timid Hindiya.
Sideen ku helaa shaqada?
Fursaduhu waa kuwo aan dhamaaneyn, fursadaha ayaa kuu jira adiga, laakiin hal shaqo uun baad leedahay, helitaanka shaqada kugu habboon adiga. Sidaan horayba u soo sheegnay, Dubai waxay leedahay fursado shaqo oo badan laakiin shaqo kasta kuma haboona xirfadahaaga, khibradaada, ama dookhaaga. Sidoo kale, waxaad u baahan tahay inaad ogaato kanaalada xayeysiiya shaqooyinka noocan ah ee ka jira Dubai.
Haddii aad khaas u tahay shahaadooyinkaaga oo aad rabto shaqo gaar ah, waxaad u baahan kartaa inaad baarto shirkadaha ugu sareeya ee Dubai iyo haddii ay shaqaaleynayaan. Waad dhiiran kartaa ood u diri kartaa emayl qabow si aad ugu xayeysiiso xirfadahaaga. Tan waxaa loo fasiri karaa rajo beel ama kalsooni. Midkasta oo macnaheedu yahay inaad adeegsato, uma badna inaad seegtid fursad shaqo marka aad xiriir toos ah la sameysid. Sheegista danahaaga iyo Ujeedada shaqadu waa hab fudud oo shaqo looga helo Dubai halka Expo 2020 ay soo socoto.
Dubai ayaa ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn ee leh xiriir internet oo deggan. Heerka tikniyoolajiyada ee Dubai iyo guud ahaan UAE ayaa sidoo kale si xawli ah u koraya. Shirkadaha badankood waxay adeegsadaan aalado dijital ah si ay u shaqaaleeyaan ama uga qeybgalaan macaamiisha. Xoogga saaristaada shaqo raadinta aaladaha internetka ayaa si fudud kuu horseedi kara shirkad fadhigeedu yahay Dubai. Xamaasadda farsamooyinka dhijitaalka ah ayaa sidoo kale fududeyneysa in la qanciyo loo-shaqeeyaha. La xiriirida shaqo-bixiyaha imaan kara ee Dubai adoo adeegsanaya emayl ama kanaalada websaydhkooda ama maareynta warbaahinta bulshada ayaa saameyn ku leh go'aankooda shaqo. Carabaha halkan jooga waa kuwo xamaasad leh xagga teknolojiyadda iyo muujinta awoodaada ayaa kicin doonta go'aanadooda.
Faa'iidooyinka ka shaqeeya Dubai
Sida Hindi ahaan, tani waxay noqon doontaa fursad nolosha lagu beddelo maxaa yeelay heerka dhaqaale ee sare ee Dubai. Tayada nolosha ayaa waliba ah mid aad u sarreysa marka la barbar dhigo Hindiya, laakiin qiimuhu weli wuu hooseeyaa. Caddadka canshuurta waa mid saaxiibtinimo leh; Biilasha adeegga waxaa la jaangooyey; elektiroonigga iyo qiimaha madaddaalada ayaa sidoo kale la nidaamiyaa. Heerka mushaarka ee Dubai ayaa sidoo kale ah mid wanaagsan marka loo eego inta badan adduunka.
Xusuusnow, waxaad fursad weyn u leedahay haddii aad India ku sugan tahay. Dowlada Hindiya ayaa sidoo kale taageerta soonka ka baaraandegidda fiisooyinka shaqada ee Dubai.
Shaqooyinka Dubai ee Indias gudaha UAE - "Tilmaamo aad u war badan". Hadda shaqa-doonayaal ka yimid Hindiya hadda waxay u diri karaan resume shirkadeena. Boggeena goobta shaqada ayaa loo yaqaan shirkadda Dubai City oo hadda shaqaaleysiinaya UAE. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, kooxdayadu waxay caawimaysaa dadka u dhashey dalka Hindiya si ay shaqo u helaan gobolka Gacanka. Sida shaqaale cusub oo ka yimid India. Waxaad adeegsan kartaa adeegyadayada si aad u hesho shaqo riyo ah oo ka socda UAE. Gaar ahaan Dubai, Abu Dhabi iyo magaalooyinka Sharjah. Guud ahaan, kooxdayada shaqaaleysiinta waxay maamushaa shaqooyin xiiso leh oo ka jira Dubai oo loogu talagalay Hindiya. Adeegyadayada HR waxay inta badan u heellan yihiin dadka shaqo doonka ee Hindida ah. Noqo qof dalxiis ah iyada oo shirkadeena hadda waa mid aad u fudud. Adeegyadayadu waa bilaash xirfadlayaal cusub. Waxaad soo dejin kartaa resume hoos ku xusan iyo shaqo ka raadso UAE. Guud ahaan, Hindida ayaa leh fursadaha ugu badan ee Dubai City.
Markii aan ka codsado shirkaddaada waan lahaan lahaa Xaqiijinta in shaqooyinka la helayo la sameyn doonaa?. Jawaabteena waa Haa, inta aad noo soo direyso dalabkaaga. Mid ka mid ah wakiiladeena ayaa kula soo noqon doona macluumaad iyo faahfaahin. Xaaladaha qaarkood waxaan u baahanahay inaan kaala hadalno Skype ama WhatsApp. Laakiin dalabka kadib, waxaad filan kartaa shaqo Dubai inaad tahay qof Hindi ah.
Ma shaqeyn kartaa Dubai Dubai?
Haa, shirkadeena ayaa ka caawisa shaqo doonka Hindida inay shaqo ka helaan Emirates. Mid ka mid ah maareeyayaashayada HR ayaa had iyo jeer caawinaya sidii loo heli lahaa a shaqo uga shaqeysaa Dubai oo Hindi ah 12th pass iyo sidoo kale shaqooyinka Dubai ee loogu talagalay shaqaalaha Indian 10th pass pass. Marka, guud ahaan hadlidda, waxaa jira suurta gal weyn shirkada Dubai City Company shaqo ka raadinta Imaaraadka. Hadafkayagu waa inaan ka caawino shaqaalaha Hindiya inay noqdaan mid ka mid ah xoogsatada muhaajiriinta ee Abu Dhabi ama Dubai.
Kooxda kaliya ee taban ayaa kooxdeenu marwalba wajahaysaa heshiis adag xagga nidaamka dalabka. Tan waa in lagu sameeyaa dhinacaaga, waana inaad ahaataa '100%' hubso in dalabkaaga shaqo uu noqdo iyadoo fiiro gaar ah u leh faahfaahinta magaalada Dubai. Kooxdayadu marwalba waxay isku dayaan inay riixaan arjigaaga waxoogaa yar oo kugu kallifaya dabcan mushaharka ugu fiican ee suurtagalka ah.
Mar walba waxaa jira heer shaqooyin ah oo aan bixin karno:
Heerka galitaanka ( Ardayda Qalinjabisay ) Aan ka yarayn $ 3,000 illaa $ 4,5000 bishii.
Maareynta Dhexe (3 illaa 10 khibrad sanadeed) Aan ka yarayn $ 5,000 bishiiba, xaaladaha qaarkood illaa $ 8,000 - $ 11,000 bishii bilaa lacag la'aan ah.
Maamulka sare waa inuu lahaadaa wax kabadan 8 sanado khibrad ganacsi u leh ganacsiga Dubai, injineer ama khibrad gaar ah oo kooxda ah. Mushaharka waqtigan ayaa aad uga badan $ 10,000 ilaa $ 25,000 bishii.
Maamuleyaal aqoon sare leh, Agaasimayaasha, CFO, Maamulaha shirkada ayaa filan kara waxbadan in ka badan $ 25,000 bishii. Laakiin shaqooyinkaan fadlan soo sheeg si qarsoodi ah.
Si kastaba ha noqotee, haddii aad u egtahay wax intaas ka badan, mushaharkaagana waa dariiqa kaa yaraanaya. Fadlan ka codso dalabkaada shirkadayada maxaa yeelay Dubai waxay leedahay wax walba. Markaa maareeyahayaga HR wuxuu fiirin doonaa feylashaada wuxuuna kaa caawin doonaa inaad kor u kacdo mushaharka.
Miyaan u baahanahay inaan helo fiiso si aan shaqo uga helo UAE?
Maya, mid ka mid ah qodobbada ugu waaweyn ee shirkaddayada ah waa adeegyo dib u dejin deg deg ah oo fudud. Marka, guud ahaan markaad lahadasho, shirkadaada waxaad kuheli kartaa warqad warqad ah intaad India joogtid. Inta badan Shaqooyinka Dubai ee Hindiyas lagu maamuli karo khadka tooska ah. Marka, jawaabtaadu waa maya, shirkaddeenu waxay kaa caawin kartaa inaad shaqo ka hesho Imaaraadka Carabta. Mid ka mid khaladaadka ugu weyn ee kooxdeena HR ay maalin walba arki karto waa khibrad la'aan. Tusaale ahaan, dadka Hindida ah ee shaqo raadsanaya markay booqdaan fiisaha Imaaradka. Waana wax ka yar boqolkiiba laba fursadda ah in shaqadan raadinta noqoto mid guuleysata.
Sidaas daraaddeed, sida shaqo looga helo Dubai iyadoo Hindi ah oo xarunta wicitaanka ka dib? Hagaag, sida kaliya ee loogu shaqaaleysiin karo Imaaraatka waa in si fudud wax walba loo kala saaro. Codsiga ugu horeeya ee shaqooyinka, markaa loo shaqeeyayaashu waa inay soo saaraan fiiso ka dibna duuliyayaal duulaya ayaa la ballansan karaa ku imanaya Imaaraatka qaab sharci ah.
Keen CV shirkada Dubai City
Guji Hoos waxaa ku xusan 100% Dammaanad!
Fadlan sidoo kale wadaag si aad dadka kale uga caawiso inay shaqo ka helaan Dubai
Shaqooyinka Dubai - Dib u dejinta Bariga Dhexe hage loogu talo galay qarashyada
Fursadaha Xirfadaha ee dadka Hindiya ee UAE, sida xaqiiqda ah, waa heshiis weyn. Si kastaba ha ahaatee, u guurista Imaaraadka Carabta waa mid weyn laakiin waqti isku mid ah waa doorasho aad u fiican. Dubai City weli waa meesha ugu fiican ee Hindiya soo bandhigtay. Marka la eego shaqo raadinta musharrixiinta laga bilaabo Hindiya ilaa Dubai waa doorashada ugu fiican. Laakiin isla markaad go'aansato inaad aado Dubai ama Abu Dhabi. Dalab kasta oo shaqo ah waa in si taxadar leh loo hubiyo ka hor xitaa adiga dir CV-gaaga.
Kadib markaan si taxadar leh u tixgelinno xayeysiinta shaqada ee dekadaha UAE, fadlan ka fiiri bogga internetka ee la taliyaha macallinka. Dhinaca kale, waa inaad sidoo kale u samaysaa shaqo aasaasiga ah si aad u heshid booskan fursaddan ma aha xayeysiin been abuur ah. Intaas waxaa sii dheer, waxaad heli kartaa gacmo-dalbasho xirfadeed. Qof kasta oo kasoo jeeda Hindiya waxaa loo dhigi karaa shaqooyinka Dubai. Wax kastoo aad maqasheen, haddii adiga sameyso suuq-geyntaada xirfadeed ee Dubai. Xaqiiqdii waxaad kordhin doontaa fursadaada helitaanka warqad shaqo.
Qodob kale oo muhiim ah oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato fursadaha xirfadeed ee dadka Hindida ku ah UAE. Miyey tahay sannado ka dib wadamada Khaliijku in uu si madaxbanaani ah ugu keeno guddiga? Tusaale ahaan, Xirfadda Expo 2020 iyo Koobka adduunka ee FIFA sidoo kale waa fursad sii kordhaysa ee GCC. Sidaas darteed qiyaastii qiyaastii kasta oo dhoofi waxay lahaan doontaa fursad si ay shaqo u helaan dalalka Gacanka.
Sidee Shaqooyinka Dubai loogu heli karaa Hindida
Mid ka mid ah qodobbada wanaagsan ee Shirkadda Dubai City ay u soo bandhigtay musharraxiintooda waa jawaab deg-deg ah. Kooxdayada shaqaalaynta, guud ahaan markay hadlayaan, iyagoo haysta shaqooyin waxay bixiyaan toddobaad gudihiis. Laakiin waqtiga ugu dheer ee aan maamulno waxay ahayd qiyaastii 6 bilood waqtiga. Waxaa oo dhan waxay kuxirantahay khibradda musharraxa. Intaa waxaa sii dheer, ururkeenu marwalba wuxuu u baahan yahay inuu hubiyo in dhammaan dhinacyada iyo baahiyaha la bixin doono sida codsiyada macmiilka.
Waxaan caawineynaa dadka shaqo ka raadso Dubai. Xaqiiqdii, waxaan ka caawineynaa fiisada iyo helitaanka dalab shaqo ee gudaha Dubai Talooyin. Shirkaddayadu waxay bixisaa adeegyo shaqo raadin ah oo loo wareejiyo Emirates. Sidaasi darteed, musharaxiinta ka yimid Hindiya ayaa si toos ah u aadi kara Dubai. Waxaan halkan u joognaa in aan isbarbardhigno cilmi-baaris shaqo oo muhiim ah oo la leh Dubai qoto-dheer, aqoonta suuq-geynta suuqa UAE. Isku day in aad isku daydo in aad musharaxiinta u dhiibto.
Macluumaadkaa ayaa ku taageeri doona ee dhaqdhaqaaqa xirfadeed ee gudaha UAE. Shirkadeena waxay noqotaa mid caan ah oo ku saleysan adeegyadda aan bixino adeeg cajiib ah oo loogu talagalay shaqooyinka Dubai ee dadka Hindida ah.
Taasna maanka ku hay, annaga WhatsApp nidaamka qorista telefoonka gacanta waxay gacan ka geysatey meel caalami shaqo raadiyaha gaar ahaan Hindiya. Si aad uhesho hab kale oo loo maamulo hogaamiyeyaasha Hindiya ee gobolka Dubia. Waxay siiyaan fikrado qoto dheer shaqooyinka mushaharka ee bilaashka ah. Iyadoo tan maskaxda ku haysa shaqooyinka Dubai ee aad ku soo celineyso inaad ku noolaato dhulka Bariga Dhexe.
Fursadaha Xirfadaha ee Hindisaha Fikradaha ee UAE
Waxaa jira meelo badan oo Hindida ka heli karto shaqo. Shirkadda Magaalada Dubai qorista barta internetka oo leh macluumaad faahfaahsan. Habka caqliga lihi waxa weeye in la isticmaalo goob shaqo oo lagula xidhiidho kharashyada kale. Sidookale, waxaa jira wadooyin yar oo wanagsan oo loogu talagay dadka wadanka Hindiya sida kooxaha shaqooyinka iyo suurtagalnimada in lagu casuumo kuwa kale sidookale lagu daro khariidad u gaar ah khariidada Dubai.
Dhinaca kale, waa inaad sidoo kale fiirisaa shirkadaha shaqaaleysiinta ee Imaaraadka Carabta. Mid ka mid ah kuwa ugu fiican ee UAE waa a Shaqaaleeyaha waxaa lagu magacaabaa Careerjet iyo Shirkadda si fiican looga yaqaan Hindiya sida Monster Gulf. Runtii aad ayay muhiim u tahay inaad dalbato CV-gaaga. Intaa ka badan musharaxiinta 100,000 waxay maalin kasta diiwaangeliyaan, waa inaad sidoo kale raacdaa hogaankaas.
Intaad raadineysid shaqooyinka Dubai iyo Abu Dhabi. Xaqiiqdi waa inaad eegtaa annaga hagayaal loogu talagalay qurba-joogta caalamiga ah. Sidoo kale had iyo jeer hubi in fursadahaaga shaqo ee dadka Hindida ay si sax ah u socdaan. Sababtoo ah Emirates maahan suuq aad u fudud in la galo haddii aadan haysan hage habboon iyo Macluumaad.
Shaqooyinka Hindiya ee jooga UAE
Waxaad ka heli doontaa talo qiimo leh dadka ka yimid Hindiya Shaqooyinka bannaan ee Dubai. Tusaale ahaan, waa inaad ogtahay akhbaar sir ah oo ku saabsan akhlaaqda ganacsiga Bariga Dhexe. Intaa waxaa dheer, waa inaad ogaataa aqbaarta hoyga ee gaarka ah iyo sida loo helo xawaalad degdeg ah Dubai iyadoo la adeegsanayo mobile.
Aqoonsi caddayn ah iyo macluumaad faa'iido leh oo ku saabsan dugsiga ilmahaaga. Iyadoo ay weheliyaan macluumaadka bangiyada ee macluumaadka, iyo madadaalada wakhtiga firaaqada ah sida jimicsiga iyo jirdhiska. Ma aha in la sheego in macluumaadka lagu bixiyay qaar ka mid ah boggaga aysan ahayn war wanaagsan. Waa inaad isticmaashaa oo keliya website-ka ugu fiican ee shaqooyinka Dubai.
Sida xaqiiqda dhabta ah, shirkadeena ayaa ah habka ugu wanaagsan ee loo isticmaalo adeegyada qorista iyo shirkadaha kale ma bixiyaan adeegyadan. Intaa waxaa dheer, shirkadda Dubai City waxay samaynaysaa maalmo 60 ah adeegyad kasta oo shaqo raadin ah. Erayada kale ee matalaya shirkaddayada Shaqaalihii Hindiya iyada oo la tixgelinayo adeegsiga shaqooyinkeena Dubai ee loogu talagalay adeegyada dadka Hindida ah.
U fiirso Fursadaha Xirfadaha ee dadka Hindida ah ee ku nool UAE
Ku noqoshada Imaaraadka Carabta iyadoo shirkadda Dubai City. Aad iyo aad u yaab leh oo si wacan loo qabtay Hagayaasha dib u dejinta Bariga Dhexe waxaad ka heli kartaa blog-ka Dubai.
Taasi waa in la yiraahdo sannadihii la soo dhaafay, sida sawir, Suuqa shaqada ee Imaaraadka Carabta waxa laga beddelay meel ka baxsan dhulbeereed u dhexeeyaa meel fagaare ah oo cosmopolitan u badan xirfadlayaal reer galbeed ah. Si kale loo dhigo, UAE wuxuu ka kooban yahay toddoba emiriate, Abu Dhabi, Dubai, Ajman, Fujairah, Ras al-Khaimah, Sharjah iyo Umm al-Quwain. Labada xarumood ee ganacsiga ee Abu Dhabi iyo Dubai waxay bixisaa nolol caadi ah iyo fursado shaqo oo aad u fiican.
Ujeedkaan, Imaaraatka Carabtu waa adduunyo, dunida koowaad wadan leh taariikh dheer oo xasilooni siyaasadeed iyo bulsho leh Hindi ahaan. Waxaan rajeyneynaa inay ku faantaan shaqaale aad u tiro badan, aqoon sare leh, luqado badan ku shaqeeya, dhaqammo dhaqamo kala duwan leh xirfadlayaal xirfad leh oo ka yimid Hindiya, iyadoo lala xiriiro xiriirka isgaarsiinta ee gobolka iyo xarumaha kale ee maaliyadeed. Inta badan caddayntu waxay ku adag tahay Hindida Hindiya wuxuu leeyahay rikoor la xaqiijiyay oo ka badan sanadaha 30 ee bixiya mashaariic ganacsi leh sida teknoloji, ganacsi, isboorti, safar, iyo dalxiiska amniga.
Maxay u socotaa Dubai?
Dhinaca dhinaca wanaagsan, Fursadaha Xirfadaha ee Hindida ee ku nool UAE leeyahay a qaab aan sharci ahayn oo ganacsi loo maro, oo ay ku jiraan qaar ka mid ah canshuuraha ugu fiican iyo dhiirrigelinta kale ee dhaqaale meel kasta oo adduunka ah. Sidoo kale waa in la xasuustaa in Magaalada Dubai ay leedahay fursado xirfadeed heer sare ah. Iyo waxa ugu fiican barashada xirfadaha ee dadka Hindida ah.
Si loo tilmaamo xaaladaha nololeed ee nabdoon ee dadka reer Hindiya ka dhigaan meel caan ah si ay u helaan shirkadaha ganacsiga iyo qoysaskooda. Inta badan qurbaha ayaa si dhakhso ah u kordhay. Sidaas awgeed waa muhiim inaad u soo guurto Dubai.
Qodob kale oo muhiim ah: gudaha UAE gudaheeda waxaad u badan tahay inaad la kulanto kala duwanaanshaha dhabta ah ee dadka aad India kala kulanto. Xaaladahaas oo keliya, kaliya 11% dadka daggan waa wadaniyiin, ku dhawaad ​​21% waa Carab saameyn ku leh dib-u-dejinta xirfadlayaal caalami ah oo doonaya Dubai. Wadamada kale, 57% waa Koonfurta Aasiyaanka iyo 11 ee soo hartay waa Bariga Asiya iyo reer Galbeedka. Noocyada dhabta ah ee dhaqamada, luuqadaha, iyo diimaha ayaa jira, iyadoo ay ka soo qaybgaleen dalal kala duwan oo buuxinaya xirfadaha kala duwan ee heerarka kala duwan.
Sababtan awgeed, waxaan isku deyeynaa inaanu ku tusino jidka nShaqooyinka ew ee Dubai. Dhinaca xun ee talo-bixinteena loogu talagalay dadka ajnabiga ah, raadinta shaqo ee Dubai waa hab aad u dheer. Laakiin waxa ugu horreeya ee aad xasuusato waxaan isku dayi doonaa inaan kuu fududeyno. Sidaas darteed caddaynta ugu adag ee kugu caawin kara inaad qabato telefoonka gacanta shaqooyinka bannaan ee Dubai. Waa warbaahinta bulshada ee Dubai.
Tusaale ahaan, fursadaha shaqo ee Hindida ee UAE iyo shaqo ka raadinta Khaliijka. Waa heshiis riyo u ah iyaga. Kaliya si loo caddeeyo aaladda ugu fiican ee lagu meeleeyn karo Caasimadda Emirate-ka waa Kooxda WhatsApp Gacanka iyo Imaaraadka Carabta oo dhan
Maxaad u guurtay Abu Dhabi?
Waxaa jira dhowr qodob oo ah sababta aad ugu dhaqaaqayso inaad ku guurtid raasamaal halkii aad ka dooran lahayd Abu Dhabi. Tusaale ahaan caasimada Imaaraadku had iyo jeer waa ay koraan, qandaraasyo cusub ayaa halkaas lagu dhigayaa maalin walba. Tusaale ahaan, xitaa Linkedin iyo Facebook ayaa goor dhow xafiis ka furay halkaas. Dhanka kale, Abu Dhabi waa meel aad u wanaagsan loogu talagalay maareeyayaasha iibka gawaarida, injineerada iyo shaqaalaha Saliida iyo Gaaska. Marka, guud ahaan marka la hadlayo, waxay kuxirantahay waaya-aragnimada iyo xaaladaada shaqsiyeed.
Magaalada Abu Dhabi waxay aad ugu wanaagsan tahay dadka dagan. Kan leh qoysas iyo guryo iska leh. Sababta oo ah waxaa jira bayaanno badan oo xayeysiis ah iyo dhawaaqyo yar. Abu Dhabi had iyo jeer waxaa jira fursado cusub oo ka jira Abu Dhabi, laakiin waa in la xasuusto in magaaladan ay leedahay qaab-dhismeed iyo heshiisyo dowladeed oo yar oo dhinaca ganacsiga ah. Shirkaddeenu had iyo jeer waxay kaala talisaa magaalooyinka waa weyn sababta oo ah waa midka mustaqbalka cjaangooyooyin ay ka mid yihiin CEO iyo fursado shaqo CFO.
Kharashka Dubai: Qofka saameynaya qofka rabo a Shaqada Dubai. Meelaha badanaa la iska indho tiray ayaa keligood keligood tegaya. Dabcan, waxaa suurtagal ah in lagu noolaado heer aad u hooseeya sida nolosha shaqada fasalka ee 6500AED. Uma sheegin kharashka socdaalka ee horay loo bixiyay in lagu soo galo Dubai. Sidaa daraadeed iftiinka noloshada raqiis ah Dubai, waxaad u baahan tahay inaad ku darto kharashka ijaarka degaanka Dubai kaliya socdaalka waqtigeeda goobta shaqada. Iyo sidoo kale baateri loogu talagalay baabuurkaaga, caymiska gaariga, iyo khidmadaha dayactirka leh kharashka cusbooneysiinta baabuurka.
Doorasho aad u wanaagsan oo lagu bilaabi karo xirfad aad u sareeya oo xirfad leh raadinta fursado shaqo oo ku yaala UAE. Iyada oo noocan oo kale ah shaqo, waxaad heli doontaa fursad aad ku hesho gaari bilaash ah oo aad ku wado goobta shaqada. Dhinaca dhinaca wanaagsan, waxaad bixin doontaa kaliya shidaalka iyo caymiska.
Dabcan, waxaa jira farqi weyn oo u dhexeeya Hindida iyo quruumaha kale. Tusaale ahaan, Shaqaalaha Philipino waxay u guureen Dubai. Iyo sidoo kale waxay ku nool yihiin meeshan cajiib ah. Laakiin badankoodu ma joogaan sidii Hindiya. Waxay helayaan mushahar hoose. Iyo badankoodu ma helayaan shaqo fiican iyo shaqo raadin ee UAE.
Waxaanu kaa caawinaynaa ajaanibta fursadaha shaqooyinka ee dadka Hindida ee UAE.
Waa lala joogaa ku nool magaalada Dubai?
Biilasha reerka oo ay weheliso biyo, koronto, taleefan si ay ulahadlaan asxaabta, dabcan, internet, cunto dheeri ah, iyo raashin kale oo dheeri ah ama xitaa maqaayad waqti ka waqti. Intaas waxaa sii dheer, waxaa laguugu wehelin karaa qoyska / dadka kugu tiirsan ee jeclaan lahaa inay kula joogaan Dubai. Isbarbardhig ku sameynta kharashaadkaaga waa inaad kudartaa AED 2000 qof walba oo jooga Dubai. Si ka duwan wadamada kale, shaqaalaha shaqaalaha caadiga ahi waxay noqdaan kuwo aad u jaban. Si kastaba ha noqotee, marka la eego mushaharka aad u wanaagsan ee Dubai, waad ku shaqaysan kartaa gabadh shaqooyin waqti-dhiman ah oo Dubai ah qaar ka mid ah dadka deegaanka Shirkadaha Dubai haddii aad jeceshahay inaad nadiifiso gurigaaga.
Fursadaha shaqo ee dadka Hindida ee UAE Noqo fursado cusub oo yaab leh oo loogu talagalay qurbaha. Marka si kasta oo ay tahay booska aad hada raadineyso inaad hesho. Shirkadda Dubai City waxay si adag uga shaqaysaa sidii ay u bixin lahayd macluumaadkaaga faahfaahsan. Intaa waxaa sii dheer, waxaan u maareyneynaa bartayada loogu talagalay ugaarsadeyaasha Aasiya halkaasoo murashaxiinta cusub ay ka heli karaan macluumaad aad u qiimo badan oo ku saabsan nidaamka shaqaaleynta ee Dubai iyo Abu Dhabi.
Career Fursadaha loogu talagalay Hindida gudaha UAE
Aqoonsiga shuruudaha shaqada ee Dubai ee Hindida!
Inkastoo tani ay noqon karto mid run ah shirkadda Dubai tilmaan istaraatiijiyadii ugu fiicnaa ee shaqaaleysiinta Imaaraadka Carabta ee dumarka. Isla mar ahaantaana, waxaan isku dayeynaa inaan helno aasaasiga ah tirada jagooyinka Dubai City. Hadana waan la shaqeynaa had iyo jeer shaqooyinka barista ee Dubai iyo IT shaqooyinka Dubai. Sida ugu badan ee aan rabno inaad hesho fursado shaqo Dubai, waxaan u baahannahay inaan ka taxadarno shaqooyinka loo shaqeeyaha ee aad u baahan tahay.
Dhanka kale, Shirkadda Magaalada Dubai had iyo jeer iskudaya si loo gaaro meelayn sare oo meelayn ah fursadaha shaqo ee Dubai. Sidaas awgeed waxaan isku dayaynaa inaan si kala duwan u dhigno Shaqaaleynta Dubai iyo had iyo jeer ilaalinta madaxda India ku faraxsan yihiin shaqooyinka cusub ee emirates.
Helitaanka fursado shaqo xirfad shaqaale
Qodob kale oo muhiim ah waa Hay'adaha Samatabbixinta Caalamiga ah ee loogu talagalay dadka ajnebiga ah waxay had iyo jeer ku hayaa baahi la wadaagaan dadka wax raadinaya ee Dubai. Dhanka kale, Dubai City Shirkadda halkii ay gaari lahayd shaqo fudud oo fudud. Had iyo jeer xiriiriyaha udubdhexaadinta ilaa wakhtigan xaadirka ah ee la xidhiidha dadka ku haboon sida Madaxa Wakiilada, Hay'adaha Shaqaalaynta, iyo HR Manager.
Intaa waxaa sii dheer, aad u adag dhacdo kasta oo iska cad waxaan ku gaarsiineynaa ilo dhowr ah xitaa Pakistan. Markaa meesha ugu horeysa, waa inaad gaartaa ugu fiican wakiilada shaqaalaysiinta ee Dubay, si taas loo sameeyo, dabcan, Google waxa loogu talagalay Xirfadda Dubai oo isku day u raadi qorayaasha ugu sareeya Dubai iyo Abu Dhabi.
Sida xaqiiqda ah, wakiilada shaqaalaynta ee aan laga dabooli karin marwalba waxay ahaan doonaan Google ee Shaqooyinka. Waxaa intaa dheer waxaad raadin kartaa caalami hayadaha shaqaalaynta ee Mumbai, ama madaxda maxaliga ah ee Hyderabad oo la mid ah hay'adaha Imaaraadka ayaa kaa caawin kara Shaqooyinka internetka ee Dubai. Wakaaladaha xirfadlayaasha ee Dubai waxay ku takhasusan yihiin sidii loo heli lahaa dad hibo leh oo Hindiya ah, dabcan waxay khibrad u leeyihiin musharaxiinta, kadibna iyaga oo tusaale ahaan xisaabinaya shaqooyinka Dubai ama wax kale wuxuu amar ku bixiyaa shaqooyinka.
Soonaha ama ka dib adigoo ah shaqo raadiye jooga UAE. Dhab ahaantii way wada socon doontaa iyada oo loo marayo dagaalka Xirfada Emirates oo leh astaamo kala duwan. Tusaale ahaan, shaqooyinka hudheelka ee Dubai waa hab fiican. Waqtigan xaadirka ah, waa inaad sidoo kale u dagaalameysaa shaqooyinka amniga ee Dubai lala wadaago shirkadayada LinkedIn. Iyo mustaqbalka fog shaqooyinka darawaliinta ee Dubai maxaa yeelay way fududahay in la helo. Kadib kadibna ku dheji musharaxiinta mustaqbalka iyo wareysiyada waaweyn ee wareysiyada. Shaqaalaynta Dubai ee shaqo Maareeyayaasha Imaaraadka Carabta had iyo jeer waxay raadiyaan dad cusub oo Hindiya ka yimid. Sida iska cad isku soo duuboo way fududahay in laga helo Dubai iyo had iyo jeer diyaar u ah inay si adag ugu shaqeeyaan mushaharka aan caadiga ahayn.
Haa, si aad u bilawdo, waxaad ka timid Hindiya, badankoodna ka soo jeeda Asiya ayaa la abaabulay. Taas oo si faahfaahsan u faahfaahsan ujeedada gaaban, dabcan hibo leh, iyo marka loo eego kuwa kale oo firfircoon. Wax badan ayaan qabaneynaa meelaynta laga bilaabo Hindiya Dubai. Dhab ahaantii xaqiiqadeena waxay marwalba hubineysaa in aan bixino natiijada ka soo baxda isuduwidda shaqaaleynta macaamiisheena laga bilaabo Aasiya. Ma aha in la sheego in nala si muhiim ah ay tahay in aan ku xirno tirada loo qoondeeyay boosaska magaalada Dubai ee 60 aan la sugi Karin ilaa 90 maalmo cayiman. Dhab ahaantii, shirkadeena ku jirta UAE waxay had iyo jeer isku dayeysaa Shaqaalaha Hindida iyo dadka ajnebiga ah kaliya shaqooyinka ugu dambeeyay ee Dubai.
Waa maxay sababta Shaqooyinka Dubai ee loogu talagalay Hindiya si aad u caan ah?
Bilaw shaqo oo aad ku guuleysatid inaad ku guulaysato UAE
Dubai waxaa iska leh shaqo doonka caalamiga ah sidii meel sare oo barwaaqo ah oo laga aarguto shaqadiisa marka la soo koobo shaqooyinka UAE. Sababtaas daraadeed bil kasta waxay ku kacdaa fuliyayaal fara badan oo ka yimid Hindiya ka soo jeeda shaqooyinka iibka ee Dubai. Sababtoo ah muhiim in la ogaado in laga sameeyey booska lacagta ayaa kaa caawin kara inaad lacag ka sameyso Imaaraadka Carabta.
Xaaladahan oo kale, Dubai waxay noqoneysaa mid ka mid ah magaalooyinka ugu qaalisan iyo magaalooyinka hodanka ah. Shaqooyinka guud ahaan in Dubai loogu talagalay Hindiya halkaas oo dadka reer Asiya ay ku nool yihiin nolol raaxo leh. Sida lagu xusay markaad booqatay UAE sidoo kale waa waddanka ay ka buuxaan dadka hodanka ah.
Isla markiiba haddii aad ogaan doonto meesha aad ku dhufatey waxaa si sahlan loo siin karaa shaqooyinka Dubai ee loogu talagalay dadka cusub. Ugu dambeyntii, waxaad ku xirnaan doontaa tiro balaaran oo shakhsiyaad qani ah oo kaa caawin kara raadinta shaqo ee Dubai.
Wakhtiga dambe ama ka dib markaad noqon doonto musharraxa ugu dambeyntii shaqo helay goobta waxaad ku bilaabi doontaa nolol raaxo leh. Ilaa iyo inta ay magaalada Dubai ku qabato tiro badan oo ah muraayadaha waawayn. Waqtiga ay ku jiraan khibradaha ay ku jiraan hudheelada quruxda badan a fursadda shaqo. Marmarka qaarkood hoyga kireysiga iyo xarumaha dukaameeysiga ah sida xirfad shaqo oo ku yaala UAE.
Ka dib xirfad magaalo ah oo aad suurtagal tahay. Dhaqan ahaan, meeshan cajiibka ah waxaa sidoo kale loo aqoonsan yahay mid ka mid ah meelaha aadka u xiiso badan ee xaaskaaga aduunka. Waxaad ogaan doontaa markaad halkaa ka timaaddo oo aad bilowdo lacag. Sidaas darteed, bartamaha raadinta a Shaqada Abu Dhabi iyo Dubai waa isha ku hay nolosha iyo Xirfadda shaqooyinka ee Bariga Dhexe.
Shaqooyinka UAE ee Hindiya iyo shaqaale khibrad u leh?
Qofkasta oo raadinaya xirfad markii ugu horeysay ayaa maskaxda ku haya Dubai. Sida xaqiiqda ah, waxaa sidoo kale jira Abu Dhabi halkaas oo aad tahay qof xirfadle ah oo kufilan. Mid kasta Hindiya gudaha UAE waa daacadnimo raadinaya isbedel xirfadeed. Sidaas oo kale isla markiiba ha iman si aad ugaarsato xirfad shaqo ee Imaaraadka Imaaraadka Carabta ee booqashada fiisooyinka. Dhab ahaantii, dad badan oo Hindiyaan ah ayaa sheegay in ay shaqo ku heli doonaan fiisaha booqashada. Emirates 7th waxay raadineysaa dhammaan noocyada xoogga shaqaalaha, laga soo bilaabo waayo-aragnimo aan lahayn shaqaale u shaqeeya maamulayaasha.
Sida ugu fudud ee shaqo looga helo Dubai waa in laga bilaabo heer hoose. Sababtoo ah shaqooyinka maamulka ma ahan wax lagu xayeysiinayo Imaaraadka. Intooda badan kuwa si wanaagsan loo yaqaan ayaan la xayeysiin in shaqooyinka ay bixiyaan. Bixinta iyo dhaqsaha badan Dariiqa loo maro dadka khibrada u leh mooyee waa in la helo shaqooyin heer hoose ah.
Ujeedada shaqo raadinta MAGAALADA DUBAI: Hindida ku soo biiray UAE. Iyo gaar ahaan raadinaya shaqooyinka hudheelka ee Bariga Dhexe, ma ahan kaliya Emirates. Weligaa marnaba ha ku soo gelin fiisooyinka booqashada ee dhammaantood. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, shaqaale kasta oo Hindiya ah waa inuu xaqiijiyaa dalabkooda shaqo ee fiisada shaqada ee Dubai. Halkaa ku hay dadka ka yimid Hindiya iyada oo rajada la siinayo fiisooyinka ay bixin doonaan hay'adda shaqaalaynta. Wixii hal shey, samee xaq iyo ka hor intaanad imaanin dalka isku day in aad fiisada shaqada ku hesho UAE. Si loo helo hab kale, xitaa qunsuliyada Hindiya ee ku taala Emirates ayaa sheegay in ay jiraan tiro sii kordheysa oo qulqulaya shaqaale cusub oo caalami ah iyo nidaamyo fara badan oo fiisooyin ah.
Xirfadda Dubai iyo Visa for Indian
Tusaale ahaan, latalinta 2018 waa la socotaa tiro fara badan oo fara badan. Had iyo jeer guud ahaan, wicitaanada iyo booqashooyinka ay Indiya u noqdaan dhibbanaha falanqaynta ugu dambeysa ee xun raadin xirfad shaqo. Si kastaba ha ahaatee, dadka Asiya oo raadinaya shaqo waa inay la hadlaan qunsuliyadda. Sababo badan ayaa jira Shaqaalaha India kuwaas oo si joogto ah u khaldami waayey caalamka waayeelka shaqooyinka ama loo shaqeeyaha si joogto ah. Muddadii dheerayd shaqaalaha Asia ma helin shaqo ama mushahar aan la siinin.
Ilaa illaa hadda, Imaaraadka Carabtu waxay leedahay dhibaato wayn Visa for Indian. Waqtigaas ka dib, shaqaalihii xirfadlayaasha ahaa ee Mumbai waxaa loo balanqaaday in qaar ka mid ah shaqooyinka iibka ah ee ugu wanaagsan Abu Dhabi isla markaana ay si lama filaan ah dib ugu soo laabteen. Hase yeeshee, asalkiisa soo socda ee ku yimid shaqaale raadiyaha ayaa loo sheegay inay u shaqeeyaan shaqaale ahaan mushaharka ugu yar ee dhismaha dhismaha ka dibna wuxuu ku daray in uu lacag ka dhigayo Hindiya. Waxaad sidoo kale ku biiri kartaa kooxdayada shaqooyinka Shaqaalaha Pakistaan ​​ee Dubai kaliya in uu leeyahay aragti cad. Sidee waddamada kale u maareeyaan fursadaha shaqo. Xitaa sida loo helo xirfad ku yaal Saudi Arabia iyo warar badan iyo waxyaabo badan oo talo ah.
Ilaa wakhtigan xaadirka ah qeybtii kowaad ee 2017, qunsuliyada Hindiya waxay heshay warbixin ka timid Imaaraadka. Marka la eego falanqaynta kama dambaysta ah, cabashooyinka shaqaalaha 540 ee dadka Hindida ah ayaa lagu xalliyay Imaaraadka waxayna shaqo ku heleen Abu Dhabi ama Dubai City. Dhinaca wanaagsan, warbixintu waxay sheegtay Asia oo shaqaaleysiisay UAE aad ayay u faraxsan yihiin markay helaan lacag fiican xirfadaha bangiyada ee Dubai ama Hindiya.
Shaqooyinka ugu mushaharka badan ee Dubai City?
Qodob kale oo muhiim ah oo aan jeclaan lahayn inaan idin soo bandhigno adiga ayaa ah shaqooyinka ugu mushaharka badan ee Dubai City iyo Fursadaha Xirfadaha ee dadka Hindiya ee UAE. Shaqada noocan ah ayaa ka badan caan.! Fursadaha shaqo ee loo yaqaan 'CFO' iyo maamulaha guud wali waa u furan yihiin qurbaha Asia. Marka, haddii aad leedahay waayo-aragnimo wanaagsan iyo waxbarasho wanaagsan oo leh shahaadada heerka sare.
Shirkadda Dubai City dib-u-eegista mushaharka ee Dubai iyo Abi Dhabi waxay gaari karaan wax ka badan macaamiisha 300. Xaaladdan oo kale, warshadaha waaweyn ee UAE ayaa ah kuwa ugu wanaagsan ee hela shaqo. Had iyo jeer guud ahaan, waa inaad ogaataa shaqada xirfadeed ee ugu badan oo isku day inaad noqoto mid cusub musharaxa Riyada ee Koonfur Afrika. Xaaladahaas oo kale, waxaa jira tixgelin badan oo ku saabsan qaabka aad u tixgelinayso. Markaad dooranayso bilawga xirfadda cusub ee riwaayada ee UAE.
Fiiro gaar ah oo ay tahay inaad diirada la saarayaa waxaa jira xaalad mushaharka oo hooseeya isku dheelitirka nolosha iyo shaqada taasi waa inaan karo raadinta fursad intaa ka badan. Dhinaca taban ayaa nuxurka shaqada la isku hagaajin karaa ama la ii maamuli karaa aniga? Miyey bixisaa filasho korodhsi shaqo oo wanaagsan iyo sidoo kale suurtagal suurtagalnimada dakhli aan cashuur ka badnayn? Mise waxay igu kalifaysaa inaan lacag badan ku kasbado gacanta gacanta ?. Marka fiirso Fursadaha Xirfadaha ee Hindida ah ee Imaaraadka iyo Gacanka iyo waxa uu yahay doorashada xirfadda ugu fiican.
Fursadaha shaqo ee ugu wayn Dubai ee Hindida
Mid ka mid ah ugu fiicnida koorsooyinka Madaxa Sare ee Xirfadaha Shaqada ee Dubai
Bil walba qiyaasta bixiyaan iftiinka hawlgabka waayeelka ah: Dh120,000
Wadajir u dhexeeya mushaharka mushaharka: Dh65,000 ilaa Dh145,000
Sida xaqiiqda ah, khabiirada suuq-geynta ayaa sidoo kale wanaagsan in ay shaqeeyaan
Si aad u sheegto wax mushahar celin ah bishii oo ay ku jiraan hawlgabka: Dh85,000
Iskuduwaha mushaharka ee u dhigma: Dh60,000 ilaa Dh100,000
Xirfadlaha ugu sareeya ee xisaabinta iyo xirfadlayaasha maaliyadda ee UAE
Isku darka shaqooyinka kale ee ugu fiican iyo si lamid ah mushaharka kale ee celceliska billaha ah oo ay ku jiraan lacagta hawlgabka: Dh75,000
Iskuduwaha mushaharka ee u dhigma: Dh55,000 ilaa Dh90,000
Intaa waxaa dheer in bangiyada sare ee wadajir ah ay la socdaan mushaharka celceliska bishii oo ay ka mid yihiin hawlgabka: Dh70,000
A maskaxda maskaxda ku hayaan khidmadda mushaharka: Dh53,750 ilaa Dh99,500
Ku xirnayd abaalmarin qadarin ah oo qareen qareen ah oo ku yaal Dubai
Intaa waxaa dheer, shaqo aad u adag si aad uga hesho UAE sida Hindiya iyo celceliska lacagta bishii ee ay ka mid yihiin hawlgabka: Dh67,000
Iskuduwaha mushaharka ee u dhigma: Dh60,000 ilaa Dh116,000
Kadhigo shaqo adag si aad u bilowdid, laakiin inaad siiso fursado badan
Ma aha in lagu xuso xirfadlayaasha xirfadlayaasha ah ee Imaaraadka Carabta
Mushahar celcelis ahaan bishii ayaa ka mid ah hawlgabka: Dh70,460
Wadajir ula socda shaqooyinka ugu sareeya ee Gulf Dhakhtar kala duwan: Dh70,000 ilaa Dh220,000
Mushaharka la xiriira Dhakhaatiirta takhasuska ah ee takhasuska ah, maaha inay sheegaan madaxyada dhakhtarka dumarka iyo ginekologi, si siman oo leh dhakhaatiirta cilmu nafsiga ee maskaxda / cilmu-nafsiga iyo dhakhaatiirta uur-jiifka ah.
Diyaar ma u tahay inaad ka guurto Hindiya ilaa Dubai?
Waxaa jira wax kabadan codsadayaal cusub oo ah 600,000 xog uruurintayada. Maalin walba shaqooyin cusub ayaa ka socda Dubai ee loogu talagalay dadka u dhashay Hindida ayaa ku qulqulaya bartayada internetka. Shirkadeena oo leh tiro farabadan oo faraxsan oo cusub iyo shaqo dooneyaal cusub kaliya maahan India. Sababtoo ah waxaan aaminsanahay in qof walbaa inuu haysto a fursad lagu caddeeyo suuqa ugu mashquulka badan adduunka.
Waxaan dhisnay nooc ka duwan shirkad shaqaale ee Dubai. Ilaa wakhtigan xaadirka ah, waxan ka caawinnay in ka badan 1,400,000 booqdayaasha India. Sida lagu xusay adeegyada aan furan nahay markii ay kugu habboon tahay, marwalba 7 maalmaha wiiggii. Muddada dheer, waxaad ku socon kartaa shirkaddayada shaqaalaynta ee aan lahayn ballan.
Isla markiiba, waad la socon kartaa a shaqo raadinta shaqo raadinta. Guud ahaan kahadalka raadinta xirfada ee Hindi waxaan ugu fiicanahay waxa aan qabanno. Dhab ahaantii, falanqaynta ugu dambeysa, waxaan sugeynaa musharraxaaga ee dalka Imaraatka carabta. Waxaa hubaal ah inaad ka heli karto macluumaad qiimo leh xubnaheena kale. Waxaad aadi kartaa qaybta Xubnaha oo aad kula xiriiri kartaa kumanaanka qurbo-joog ah.
Ku shaqee jagada maamulaha sida duullaan Hindi ah
Ma ogtahay in ay jiraan wax badan Shirkadda Agaasimaha Guud ee India ka shaqeyneysa Emirates? Tusaale ahaan, shaqooyinka Google ee Dubai ayaa hadda la heli karaa dadka xirfadlayaasha ah ee caalamiga ah. Sidaa darteed, tusaale ahaan, fursado xirfadeed oo cusub oo loogu talagalay dadka Hindida ah ee jooga UAE way furan yihiin. Hindisaha Hindida waxaa badi lagu soo dhaweeyay Emirates. Ururada waaweyn waxay maalin kasta shaqaaleeyaan dad cusub oo ka yimid Hindiya.
Tusaale kale oo ka mid ah maamulka sare ee banaan baxyada loogu talagalay qurba-joogta Asian waa WhatsApp. Shirkadan gaarka ah, maamullada Cusub ee Asia waxay la shaqeeyaan heer sare oo waayo-aragnimo ah, gaar ahaan qeybta IT-da. Aad u muhiim ah in la ogaado waa shirkaddayada sidoo kale waxay kireysteeysaa WhatsApp. Markaa haddii aad khibrad wanaagsan u leedahay khibradda waxaad shaqo ka heli kartaa shirkadda Dubai City Company. Dhinaca taban, ma siinayno Maareeye ama jagada maareynta sare sababta oo ah waxaan horay u galnay maamulayaasha sarsare ganacsiga.
Fursadaha Shaqada ee Hindida UAE - Iyagu waa adiga adiga ku jooga Dubai.
Hadda waa waqti lagu soo afjarayo runtii u qalantaa in laga raadsado shaqo Abu Dhabi ama Dubai?
Waa runtii xaqiiqda ah in aad shaqo ku hesho Dubai sida Hindiya?
Xaqiiqdii Dubai, tani waa xayeysiiska ugu weyn ee TV-ga. Hadda waxaa jira a badan oo mashaariic cusub ah oo imanaya gobolka khaliijka. Intaa waxaa dheer, Saudi Arabia waxay hadda xad u sameysay Hindida u shaqeeya Shirkadaha Sacuudiga. Dhanka kale Qatar, marna ma siin wax ka badan qandaraasyada sanadaha 2-3. Marka, ikhtiyaar caqli gal ah shirkaddeena ayaa talo siineysa Imaaraatka. Waxaa jira wax kabadan oo ah shaqooyinka cusub ee 30,000 oo lagu daray dhowr gaboodyo shaqo oo kaliya oo loogu talagalay shaqaalaha cusub ee dadka ku nool caasimada Emirates.
Macluumaadka kale ee kugu qancin kara inaad shaqo ka hesho Dubai waa tirada Hindida UAE. Waxaa jira in kabadan dhowr milyan oo muhaajiriin Hindi ah oo diiwaangashan oo jooga Dubai iyo Abu Dhabi. Tani waa inay ku siisaa xoogaa hubaal ah go'aankaaga. Sababta oo ah haddii malaayiin dad ah ay maareeyeen waa inay nolol wanaagsan ka helaan dalka Imaaraatka. Sidoo kale waa inaad naftaada u tixgelisaa qof qiimo badan oo shaqo wanaagsan.
Shirkadda Dubai City marwalba waad hubaal ka dhigan kartaa markaad dalbato shabakadeena bulshada. Xaqiiq ahaan ayaa laguu dejin doonaa fursadaha shaqada ee dadka Hindida ee ku yaala UAE had iyo jeer waa la heli doonaa oo la maamuli karaa kooxdayada HR.
Gunaanad qof kasta oo Hindi ah oo ah shaqo ka raadsanaya Dubai
Waxaan ku talajirnaa inaan la wadaagno dhammaan macluumaadka aad hayso macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan suuq geyn suuq geyn ah gudaha Emirates. Marka, xaqiiqda dhabta ah, waxaad ka timaadaa Hindiya oo raadinaysa shaqo ku yaal Dubai muhiim ah si loo ogaado in la gaaro qoraallo maaha wax sahlan.
Dhinaca wanaagsan, waxaan halkan u joognaa inaan ku caawino, waxaanu maamuleynaa a Kooxaha WhatsApp ee shaqo doonka. Linkedin lala xiriiriyay nidaamka qorista shaqaalaynta, dib u soo noqoshada rasmiga ah ee u furan Dubai. Iyadoo taas maskaxda ku haysa in laga helo xirfad ka timid Hindiya ilaa Imaaraadka Carabta.
Iyada oo ku saleysan khibradda shirkadda Dubai City. Sida sawirada shaqooyinka iyo shaqo raadinta Bariga Dhexe, waxaan haynaa si ay ugu daraan mushaharooyinka talo bixinta Dubai, qiimeynta, iyo qaar ka mid ah talooyinka sida loo helo shaqo ku jirta UAE haddii aad ka timid Hindiya.
Si aan u dhigno qaab kale, waxaan isku dayeynaa in aan meel walba ka soo galno Hindiya oo aan ka dhigo shaqaale wanaagsan oo ka socda Imaaraadka Carabta. Guud ahaan, had iyo jeer raadi shaqooyinka MBA oo raadi raadintaada buugga ama laptop-ka haddii ay dhacdo in shaqaaleeyahaagu mustaqbalka isku dayi doono inuu waco adiga oo leh shaqo dalbasho.
Waxaan rajeyneynaa inaan aragno qof Hindi oo cusub oo ku soconaya magaca nolosha ugu fiican iyo riyada Carabiga. Waxaan kaliya haysannaa rajeynayaa in ay taasi noqon doonto!. Waxaan kuu rajeynayaa nasiib wacan oo aan rajeynayaa inaad dalabkaaga ka sameysid shirkadda Dubai.